परशुनारायण चौधरी पंचायत पसेपछि बीपीले भन्नुभयो – ओखलढुंगा काण्डमा किन धोका भयो र लिला ठगी किन मारिए ? « Bikas Times
-जयप्रकाश आनन्द -
परशु नारायण चौधरी ४/५ दिन अघि मात्र पंचायत पस्नु भएको थियो । आफ्ना केही साथीहरूका साथ उहांले निकालेको वक्तव्यको शिर्षक “अबको नयाँ बाटो” राख्नु भएको थियो । जनमत संग्रह ताकाको प्रचारका क्रममा बी.पी. कोईरालाले बहुदल आए परशु नारायण नेपालको प्रधानमंत्री हुने भन्नु भएको थियो । यस्तो मानिस सुटुक्क पंचायत पसेको सन्दर्भमा बीपीको रोजाईका वारेमा पनि प्रश्न उठेको थियो ।
परशु जीको पलायनका सम्बन्धमा बीपीको प्रतिकृया पनि जोशिलो र आलोचनात्मक थिएन । “नेपाली जनताले जुन कारणले परशु नारायण चौधरीलाई माया गरेका थिए, सो कारण अब रहेन ।” यही थियो बीपीको प्रतिकृया । आजको जस्तो तथानाम गाली गरेर उहाँले केही भन्नु भएन । वा, भित्र भित्र कुरा मिलाएर गएका हुन कि; यस्तो आशंका गर्ने पनि केही थिए ।
डा. तुलसी गिरी, विश्वबन्धु थापा, डा. नागेस्वर सिंह-यस्ता मानिसहरूको सूचि लामै थियो, जो एक समय बीपीका बडो नजिक रहेका थिए । सहकर्मीको रोजाईमा बीपीमा बढी त्रुटी छ, यस्तो चर्चा खुब हुने गर्थ्यो ।
बीपी 1977 नोभेम्बरमा उपचार गराई अमेरिकाबाट फर्किनु हुदां परशु नारायण र गिरिजा बाबु दुबै जनालाई पटना-काठमांडूको हवाई जहाजमै उहांले प्रतिबन्धित नेपाली कांग्रेसको महामंत्री बनाउनु भएको थियो । यो एक छुट्टै रोचक ऐतिहासिक प्रसंग हो । फेरी लेखौला । यसरी एकै पटक दुई जना महामंत्री भएको शायद गिरिजा बाबुलाई तेतीसारो मन परेको थिएन क्यार !
त्यस साँझ चावहिल मित्रपार्कको बीपी निवासमा शेख इद्रिस पनि हुनुहुन्थ्यो । परशु जीको पलायनपछि शेख साहेबले बीपीका प्रति दरो भरोसा जनाउनु भएको थियो । खानाको अन्त्यमा बीपीले रूचि पूर्वक खीर खादै गर्दा चक्र जी, चक्र बास्तोलाले कुरा उठाई हाल्नु भो । यो कुरा फेरी गिरिजा बाबुको पनि रूचिको कुरा भएको थियो । तेसैले बीपीले यसको जवाफ नपन्छाउनु होस भनेर गिरिजा बाबुले चक्र जी तिर उन्मुख हुदै जिज्ञासा गर्नु भो; के भन्नु भो अरे चक्र जी ? बीपी, गिरिजा बाबु, सुशील दा, शेख इद्रीस, बीरेन्द्र दाहाल, म; हामी सबै चक्र जीका प्रति उन्मुख भयौ । चक्र जी बीपीसंग सदैव निर्भिक रहनु हुन्थ्यो । गिरिजा बाबु सदैब थिचिएको !
चक्र जीले भन्नु भयो; हैन सान्दाजु, परशु नारायणलाई त तपाईले निकै पत्याउनु भएको थियो । उनले धोका दिए । तपाईलाई शंका थिएन ? के पहिले देखिनै उनि प्रति तपाईको विश्वास अडीग थियो र ?
बीपीले चक्र जीलाई भन्दापनि गिरिजा बाबु तर्फ मुखातिव हुदै सोध्नु भयो-गिरिजा कुनै पनि सहयोगीसंग तिम्रो सम्बन्ध विश्वासबाट शुरू हुन्छ कि आशंकाबाट ? गिरिजा बाबुले संकोचका साथ भन्नु भयो-म त लामो समयसम्म मानिसको परख गर्छु । शुरूमा त शंका गरिरहन्छु । परफेक्ट देखिएपछि मात्र विश्वास गर्छु । बीपीले सोध्नु भयो-ओखलढुंगा काण्डमा के भयो ? के कारणले नख्खुबाट झिकिएर लिला, ठगीहरू मारिए ? दुर्गा सुवेदीहरू किन तिमीसंग रहेनन् ?
बीपीले थप्नु भयो: सोच्दै गर्नु । म त विश्वासलाई नै आधार मान्दछु । पत्यार, अपत्यार, विश्वास र अविश्वास, भरोसा र धोका चिरन्तर र चिरस्थायी कहां हुन्छ र ? यो सर्वकालिक हुदैन । मानिसको सोचलाई तत्कालिक परिस्थितिले निर्धारित गर्दछ । तत्कालिक परिस्थितिलाई भने उस्को बाध्यता, प्रतिकूलतालाई ब्यहोर्ने क्षमता, लोभ र नि:स्पृहताले निर्धारित गर्दछ । यसर्थ, कोही संगको सम्बन्ध भने शुरूका दिनको विश्वास वा आशंकाको आधारमा सदैव निर्धारित भै रहदैन ।
सबैले विस्तारै दुधको खीर सकेका थिए । मन मिठो भएको थियो । तर, यस सम्वादले भने सबैलाई, खासगरी बीपी वाहेक हामी सबैलाई उद्वेलित पारेको थियो ।
मेरो उ बेलाको उमेर नेताको कुरामा प्रश्न उठाउने थिएन । तर, बीपीले जे जवाफ दिनु भयो; मेरो लागि आज पनि प्रश्न रहित नै छ ! हो त, कोही संगको सम्बन्ध भने शुरूका दिनको विश्वास वा आशंकाको आधारमा सदैव निर्धारित भै रहदैन । को कहाँ रहन्छ, कोही कहाँ पुग्छ । तर, ज्ञान भने सर्वकालिक नै हुन्छ ।
जेपी गुप्ताको फेसबुकवालबाट